Izicelo ze-iPhone | IPhone iindaba
KwiVenkile ye App kukho amawaka ezicelo kwaye kunzima kakhulu ukufumana eyilungeleyo into oyifunayo ukuba awuyazi igama layo. Kwi-Actualidad iPhone siya kukufundisa yonke imihla ezona zicelo zihle zikhutshelwa ifowuni yeApple. Siza kuphinda sive ukuba zinomdla kwaye zinovelwano kuwe ukwenzela ukuba uhlale usothuka kukusetyenziswa onokunika i-iPhone yakho. Inkqubo ye- uhlalutyo kunye nokuphononongwa baya kungena nzulu ngakumbi ukuze wazi onke amathuba esicelo.
Qala ukukhuphela usetyenziso lwe-iPhone yakho
Ukuba ulahlekile kancinci kwaye umtsha kwiVenkile yeApple, nazi iiapps ezisimahla nezihlawulelwayo onokuzikhuphela kwi-iPhone yakho.
Ngokukhethwa kwangaphambili, uya kufumana gcwalisa i-iPhone yakho ngezicelo entsha inomdla.
I-Apple iya kuvumela abaphuhlisi ukuba banyuse ixabiso lokubhaliselwa kwabo ngemida ethile
por UKarim Hmeidan yenzayo Iintsuku ze2 .
Sele silibele kodwa kwiminyaka embalwa edlulileyo bekungekho App Store okanye nayiphi na ivenkile yesicelo. Namhlanje...
I-WhatsApp iya kukuvumela ukuba ushiye amaqela ngaphandle kokwazisa abanye abasebenzisi
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sifunde ukuba i-WhatsApp yayidibanisa izihluzi zokukhangela kwi-beta yesicelo sayo ...
por UIgnacio Sala yenzayo Iintsuku ze3 .
I-WhatsApp iqala ukuvavanya izihluzi kukhangelo kwi-beta yayo
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iintsuku ze6 .
Iibeta ze-WhatsApp zihlaziywa rhoqo. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo uLuntu lwabhengezwa ngokusemthethweni, inqaku...
I-NapBot ye-Apple Watch ihlaziywa kunye nokongezwa kohlalutyo lwe-apnea yokulala
por UKarim Hmeidan yenzayo Iveki e-1 .
Kuninzi okuthethiweyo malunga namathuba esinawo okusebenzisa izixhobo ezinje ngeApple Watch ukujonga indlela…
ITelegram inokongeza imisebenzi eyodwa phantsi komrhumo wePrimiyamu
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iiveki ze2 .
Usetyenziso lwemiyalezo sisonka semihla ngemihla kwizixhobo zethu. Ngokunyukayo basisiqalelo esithi...
I-WhatsApp iya kukuvumela ngokukhawuleza ukuba ubone iimeko ezivela kwi-tray yengxoxo
Oomatshini be-WhatsApp bangaphezulu kwe-oyile. Izinto ezintsha ziyaqhubeka inyanga nenyanga kwaye zonke ziyafana…
Ufikelela njani kwi-1Password 8 beta yoluntu kwi-iPhone okanye kwi-iPad yakho
Izolo nje sikuxelele ukuba i-1Password ikhuphe olona hlaziyo lukhulu kwiqonga layo ukuza kuthi ga ngoku. Imalunga ne…
Uhlaziyo olumangalisayo lwe-1Password 8 ngoku luyafumaneka kwi-beta yoluntu
Ukhuseleko lweeakhawunti zethu lubalulekile ukuze amava ethu omsebenzisi angakholeleki. Ukuphucula loo mava...
Yintoni entsha kuWhatsApp: Uluntu, iifayile ukuya kuthi ga kwi-2 GB nangaphezulu
I-WhatsApp yenye yezona zinto zisetyenziswa mihla le ngabasebenzisi abaninzi. Kwiinyanga zamva nje…
'Tshintshela kwi-Android' app entsha kaGoogle yokudlulisa idatha ukusuka kwi-iOS ukuya kwi-Android
I-Apple isebenze indlela ende yokuyila isixhobo esikuvumela ukuba uthumele idatha kwisixhobo se-Android ukuya kwi-iOS…
Konke malunga neebhloko kwiTelegram
Wazi njani ukuba ngubani ongandilandelanga kwi-Instagram
Ungaguquguqula njani iividiyo zeYouTube kwiMp3 nge-iPhone